RASMI: Kooxda Manchester United oo soo dallacsiisay Nicky Butt xil muhiim ahna u magacawday – Gool FM
(Manchester) 22 Luulyo 2019. Nicky Butt ayaa la soo dallacsiiyey si uu noqdo madaxa horumarinta kooxda koowaad ee Manchester United.
44-sano jirkaan khadka dhexe uga ciyaari jiray Man United ayaa ka soo baxay akadeemiga kooxda, laakiin waxaa la warinayey muddooyinkii dambe inuu door cusub ka helayo maamulka kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Kooxda Man United oo ku dhammaysatay kaalinta lixaad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa rajaynaysa inay arrintani ka caawin doonto inay horumar sameyso, maadaama ay dhinaca horumarinta u magacaabeen Nicky Butt.
Nicky Butt ayaa yiri: “Manchester United waxa ay ku jirtaa DNA-geyga, waa waqti aad iigu wanaagsan aniga.”
Butt kaasoo 387 kulan u saftay kooxda Manchester United ayaa hadalkiisa intaa ku daray: “Anigu waxaan xiiso u qabaa inaan kobciyo, horumariyo, isla markaana aan tababaro xirfadleyda aan halkaan ku haysanno si ay u noqdaan xiddigo sare oo kooxdaan ah.”
Waxa uu Butt horay u ahaa oo laga soo dallacsiiyey madaxa akadeemiga kooxda, laakiin waxaa xilkaas ka bedeli doona Nick Cox.